केही दिनमै आन्तरिक उडान खोल्ने तयारीमा, त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/केही दिनमै आन्तरिक उडान खोल्ने तयारीमा, त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय !
चैत ११ गते (लकडाउन) देखि हवाई उडानमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध चाँडै खुला हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पहिले आन्तरिक उडान खोल्ने गरी सरकारले तयारी थालेको बताएका हुन् । त्यसपछि अगस्तको दोस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘हामीले अरु देशले कसरी उडान खोलिरहेका छन् भनेर पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई त्यसको निगरानी गर्न भनेको छु । चाँडै नै आन्तरिक उडान खोल्ने गरी पूर्वतयारी गरेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने त्यसपछि मात्र खोल्छौँ ।’
साउन ६ गतेसम्मको प्रतिबन्ध पछि खुला गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले ‘यति चाँडो त होइन तर खुल्न चाहीँ चाँडै खोल्ने तयारी रहेको’ बताए । साउन ६ गतेसम्मका लागि लगाइएको उडान प्रतिबन्ध केही समय थप भएर उडान खोल्ने देखिएको छ । यद्यपि, उडान खोल्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने विषयको टुङ्गो मन्त्रिपरिषदले लगाउनेछ । सम्भवतः विहीबार सार्वजनिक हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यस विषयको पनि सम्बोधन हुनेछ ।
अहिले आन्तरिक उडान खोल्ने पूर्वतयारी भने भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने अगस्तको दोस्रो साता खोल्ने सङ्केत पर्यटन मन्त्रीले दिएका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम न्युनिकरण गरी सुरक्षित हवाई सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रोटोकल तयार गरि स्वीकृत भइसकेको छ । प्रमुख विमानस्थलमा निश्चित दुरी कायम गरी सञ्चालनको तयारीको लागि मार्किङसहितको सुरक्षा उपाय उपनाइएको छ ।
उर्लाबारीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट ७ वर्षीया अदीतिको मृ*त्यु
किन भेट्ने बितिकै झगडा गर्छन् सुष्मा र पूजा ? यस्तो छ भित्री रह्स्य